Dowlada Soomaaliya oo bilowday Diiwaangelinta Diyaaradaha iyo Ruqsad siinta xirfadlayaasha -
Home News Dowlada Soomaaliya oo bilowday Diiwaangelinta Diyaaradaha iyo Ruqsad siinta xirfadlayaasha
Dowlada Soomaaliya oo bilowday Diiwaangelinta Diyaaradaha iyo Ruqsad siinta xirfadlayaasha
Dowlada Soomaaliya ayaa bilowday diiwaangelinta diyaaradaha iyo ruqsad siinta xirfadlayaasha iyadoo la diiwaangeliyay diyaaradii ugu horeysay muddo soddon sano ah.
Munaasabad lagu daahfurayay oo ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa ka qeybgalay oo goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah Safiirada dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya, Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka, milkiileyaasha Soomaaliyeed ee leh Shirkadaha diyaaradaha Iyo hawlwadeenada Wasaaradda Gaadiidka Iyo Duulista Hawada Iyo Hey’adda duulista Rayidka Soomaaliyeed.
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa guddoonsiiyay oggolaansho shaqo iyo rukhsado ka marag kacaya aqoontooda shirkadaha duullimaayada iyo Duuliyaal soomaaliyeed.
Previous articleIlhaan Cumar oo loo magacaabay xil muhiim ah
Next articleAfhayeenka Booliska oo faahfaahin ka bixiyay qarax ka dhacay Muqdisho